SIDA DIIN UGA NAXAY XAALKA SOOMALIYA | Wacyigelin's Blog
Ahmed Galaydh on U ISTAAG SOMALIA MPLS MNmohamed anshur on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…سليمان on DARIIQA JANADA LOO MARO: QISO…siciid on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…Abdirizaak ahmed on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…wacyigelin on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…mohamed on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…Dr. Farxaan jama on DARIIQA JANADA LOO MARO: QISO…Peter Greste case: i… on Al-Jazeera’s Peter Grest…Johnd761 on LOS ANGELES CITY PLANER FAISAL…Mahad xiddig on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…wacyigelin on العلم والإيمان – د. مصطف…Bucul on DHOWR ASKERI OO KA GOOSATAY JA…En ismail abdi yasin on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…yassin saleh osman on KA TASHADA CADAAWOHOO ISKU TII…	SIDA DIIN UGA NAXAY XAALKA SOOMALIYA
Posted on May 16, 2010 by wacyigelin	Aqristow maalin dhowayd ayaa qiso aad la yaab u leh ka dhacday magaalada New York ee dalkaasi Maraykanka. Waxaa shir lagu qabtay xarunta Qaramida Midoobey ku leedahay halkaas. Mar uu shirki dhamaad ku dhowyahay ayaa meel aan aad uga fogayn calamada dowladaha aduunka ee ka babanaya halkaas waxaa haasaawe ku lahaa shimbirka qoolayda loo yaqaano iyo diin. Diin oo dhulka cagaaran ee kuwareegsan dhismaha qaramida madoobey u soo hawa qaadasha doontay ayaa waxaa u yimid shimbirka qoolayda loo yaqaano. Marki ay isi salaameen ayaa qoolaydi waydiisay waxa ka socday meesha oo dadku ugu soo xoomeen. Sidan ayay u dhacday sheekadoodi.
Qooley: war diinow maxaa ka socda meesha?
Diin: Meesha aduunka ayaa shir ku leh.
Qooleey: oo muxuu ku saabsanyahay?
Diin: Waxaa looga hadlayaa arimaha burcad badeedda Soomaaliya.
Qooleey: Himmmmmmmmm, Himmm. Waa dhul aanan weli tegin balse maqalkiisu iga batay ee maxaa laga sheegayaa?
Diin: Waxaa laga hadlayaa sidi loo cirib tiri lahaa burcad badeedda.
Qooleey: Waxaan maqlay in dowlad walba aduun fara badan ku bixiso si ay u dabartirto burcad badeedda. Waxaa la leeyahay waxay qattar ku yihiin isu gooshka ganacsiga aduunka.
Diin: Taasi waa jirtaa, balse wixi dalkooda qatarta ku ah weli lagama hadlin.
Qooleey: Maxaa ka mid ah?
Diin: Runti dadkan Soomalida lagu magacaabo waxay ku siganyihiin inay dabar go’aan. Taana waxaa ugu wacan iyadoo beriga iyo badda Soomaalidu ay noqdeen qashiqubka sunta haraaga nukleerka iyo weliba wasakhda khatarta ah ee laga soo dhaqaajiyo dunida horumartay isbitaaladooda. Wxaa hadda aad ugu kordhaya Soomaaliya cudurka kansarka iyo cuduro kale oo aanan horay looga aqoon halkaas. Mar dhowed waxaa cudur aan la garanayn u geeriyooday boqolaal geel ah. Tan kale, beri dhowayd waxaan maqlay in markab ka kaluumaysanaya xeebaha Soomaliya uu dardaray doon yar oo ay saarnaayeen kaluumaysato Soomaali ah. Waxaa la sheegay inay afarti kaluumaysatda ahayd dhinteen. Cid iswaydiisay ma jirto.
Qooleey: Taa macneheedu ma waxay tahay in dalalkan ku andacoonaya la dagaalanka burcad badeedda ay dano gaar ah ka leeyihiin halkaas.
Diin: Waa sidaas. Tusaale u soo qaado. Faransiiska oo dhowaan laayey burcad badeed Soomaali ah waxaa la sheegay inay konton iyo lix markab oo kaluumaysi u joogaan xeebaha Soomaaliya. Balse waxaa iga yaabiyay wadamaddan reer galbeedka ee aan dadkooda u diir naxayn. Waxay ku shubaan haraaga nukleerka biyaha Soomaaliya haddana isla biyahaas ayay kaluun inta ka jilaabtaan ku quudiyaan dadkooda.
Qooleey: Soomaalidu waa looma ooyaan aynan cidina u maqnayn. Laakiin waxaan aaminsahany inay iyagu sabab u yihiin dhibkooda.
Diin: Waa sidaas oo waa looma ooyaan. Waxaad ogaataa hadii baniaadamku ka nixi waayo oo uu u naxariisan waayo Soomaalida ilaahay ayaa jooga oo xal u keeni doona arintooda daba dheeraatay. Meel dheer tusaale ha u raadin ee aniga uun iarag. Aniga ilaahay qoloftan wuxuu igu daboolay kadib markii shirqool lay abaabulayey oo la doonayey in hilibkayga la cuno balse intaan sidaasi dhicin ayaa ilaahay iigu deeqay qoloftan. Soomaaliduna sidaas ayaa ilaahay ugu naxariisan karaa.
Qooleey: Waxaan filayaa inuu dhamaaday shirki.
Diin: Waa sidaas ee aan alle u barino in uu Soomaalida tuso wanaagga iyo tubta toosan ee ay ku bad baadin karaan dalkooda iyo dadkooda.
Aqristoow sidaas ayay qooleey iyo diin ugu duceeyeen Soomaaliya marki baniaadamku ay u shirayeen sidii loo dhibaatayn lahaa. Dhibaatadu kuma saleysna oo keliya la dagaalanka burcad badeedka balse markasta oo Soomaalidu ay hesho yididiilo nabadeed waxaa laga shaqeeyaa sidi loo dhicisayn lahaa. Haddaba yaan sugaynaa? Waxa aan sugayno waa adiga iyo kan kula midka ah marka hadda ku dhaqaaq inaad maskax, muruq, maalba aad gelisid sidi aan nabad u heli lahayn
Filed under: Uncategorized « SOOMAIYA SOOMALI BAA LEH: DHEGAYSO ABWAANKA WAYN CABDI TAHLIIL HEESTI ARLIGAYGOOW: DHEGAYSO »